कंगनालाई गायिकाको आरोप- आफ्ना लागि बाहेक कसैको लागि उठ्दिनन्, कंगनाले गरिन् ब्लक :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, असोज १३
पछिल्लो समय कंगना रनौत चर्चामा छिन्। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेपछि बलिउडमा सिंहले बलिउडको गुटबन्दी, नातावाद र कृपावादका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको बताएयता उनी निरन्तर चर्चामा रहँदै आएकी छन्।
उनी कंगनामाथि बलिउड गायिका सोना महापात्राले ट्विट गर्दै उनी आफ्नो बाहेक अरूको पक्षमा नउभ्भिने स्वार्थी भएको बताएकी छन्।
योसँगै सोनाले बलिउडका केही नराम्रा प्रवृत्तिमा आवाज बुलन्द गरेकोमा कंगनालाई बहादुर भन्न सकिने बताएकी छन्।
'कंगना आफ्नो लागि बाहेक अरू कसैका लागि उभिएकी छैनन्। उनले आफ्नो सरहाना गर्ने मानिसलाई पनि कहिले याद गरेकी छैनन्। यो कुनै परिवर्तन चाहने वा कुनै पनि विचार बोक्ने नेताको लायक पनि होइन। हो, उद्योगमा जारी केही नराम्रा प्रवृत्तिको विरूद्ध आवाज उठाउन उनी एकदमै बहादुर छिन्। मात्र यत्ति हो...?', सोनाले ट्विट गरेकी छन्।
'जब कसैले अनुष्का शर्मा र बाँकी मानिसका बारेमा पोस्ट सेयर गरेका थिए। म यही भन्छु की कंगना रनौत कृपया केही नारीवादी साथीहरू बनाउनुहोस् र केही राम्रा सल्लाहकार राख्नुहोस्', अगाडि ट्विटमा उनले लेखेकी छन्।
यसैगरी सोनाले कंगनालाई पीडित महिलाका रूपमा पेस नहुन भन्दै व्यंग्य गरेकी छन्।
कंगनाले सोनालाई ट्विटरमा ब्लक गरेकी छन्। यसको जानकारी पनि सोनाले ट्विटमा दिएकी छन्।
'मैले कहिले उनलाई फलो गरेको थिइन तर आज यसबारेमा मलाई थाहा भएको छ। कंगना हरकोहीको आलोचना गर्न चाहन्छिन्। तर के उनी दुनियाँ आपसी परस्परतामा काम गर्छ भनेर जान्दिनन्? उनले यो यी सबै चीजको सामना कसरी गर्ने भनेर जान्नुपर्छ', ट्विटमा उनले भनेकी छन्।
Also,Kangana hasn’t ever stood up for anyone but her own self & hasn’t acknowledged anyone who has cheered her in any case.That’s notachange maker or even thought leader of any worth.Yes,she’s been brave to call out some of the industry’s ills.That’s all.Will call her bluff. ?? https://t.co/M4m9mpCT8a
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १३, २०७७, ०२:२५:००
मलाई 'पा' फिल्म खेल्न मन थिएन : अभिषेक बच्चन